कस्तो अचम्म ! चिनियाँहरुको छतमा खेतिपाति देखि पशुपालनसम्म देखेर दुनियाँ चकित ( हेर्नुस फोटोहरु ) – Nepal Trending
कस्तो अचम्म ! चिनियाँहरुको छतमा खेतिपाति देखि पशुपालनसम्म देखेर दुनियाँ चकित ( हेर्नुस फोटोहरु )
On २८ असार २०७६, शनिबार १९:०७
काठमाडौँ । हाम्रो मुलुक कृषिप्रधान । तर, परम्परागत खेती नै गरिन्छ । अझै व्यवसायिक बन्न सकिरहेको छैन । गाउँहरु रित्तिदैंछन् । ‘पढ्ने उमेरसमूहका विकसित मुलुकतिर, काम गर्न सक्नेहरु विदेशतिर, श्रीमतीहरु बालबच्चा पढाउन भन्दै शहरतिर, गाउँमा बुढाबुढी मात्रै ।’ भन्ने व्यंग्यवाण सुनिन्छ अचेल । त्यसैले बिहान बेलुका खाने अन्न मात्रै होईन तरकारी पनि भारतकै निर्भर गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
नाकाबन्दी हुँदा अन्नपात, प्याज, टमाटर हाहाकार भयो । अहिले भारतले विषादीयुक्त तरकारी निर्यात गर्दा सरकारले खुट्टा कमायो भनेर सामाजिक सञ्जाल उत्तिकै तात्तिएको छ । नेपाल आफै सबै कुरा उत्पादन हुने जमिनयुक्त मुलुक हो । तर हामी खेती गर्दैनौं, शहर पस्छौं, सबै किनेर खान्छौं । शहरमा घर हुनेहरुले पनि अब जे जति जमिन उपलब्ध छ, त्यसैमा तरकारी उब्जनी गरे हुन्न ? यसका लागि चिनियाँ उदाहरण काफी छ । आज भन्दा ५ दशक अघिसम्म भोकमरीले ग्रस्त चीन अहिले विश्वकै सम्पन्न मुलुकमा गनिन्छ । यो सम्भव हुनुमा चिनियाँ सोचले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । आइडिया राजनीतिमा मात्र हैन प्रविधिमा, कृषिमा, आविष्कारमा, पररास्ट्रनीतिमा चिनले राम्रो तरिकाले लगाएको छ ।
यो प्रसंग भने कृषिको आइडियाको बारेमा छ । सिचुआन प्रान्तमा रहेको जिन्ताई गाउँमा स्थानीयहरूले सरकारको सहायतामा वातावरणमैत्री घर बनाएका छन् । यी घरको छतमा खेती गर्न सकिन्छ । केही वर्षअघि भयानक भूकम्प आएर यहाँ बस्ने मानिसलाई समस्या परेको थियो । तर, सरकारको नयाँ प्रयोग र त्यहाँका मानिसको मेहनतको प्रतिफलस्वरूप यो अहिले संसारकै नमूना गाउँ भएको छ । सन् २००८ मा वेनचुआन भूकम्पका कारण जिन्ताई गाउँनजिक करीब ८० प्रतिशत घर पूरै नष्ट भएका थिए । अनि ५० लाख मानिस बेघर भएका थिए । त्यसपछि सन् २०११ मा भयंकर पानी परेर पहिरोका कारण फेरि बनाइएका घर पनि ध्वस्त भए । तर, त्यसपछि सरकारले गाउँलेहरूको सहायताका लागि हङकङ विश्वविद्यालयमा यी घरहरूको डिजाइन बनायो ।